नेपाल क्रिकेट संघ र खेलाडी बिचको समस्या अझै टुंगिएन
Optimus Prime December 13, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| केहि महिना यता नेपाल क्रिकेट संघ र नेपाली क्रिकेट खेलाडी बीच खेलाडी बर्गिकरणको किचलोले ठुलो रुप लिएको छ।
क्यानले अहिले मासिक रुपमा ग्रेडिंगको हिसाबले आफ्नो सम्झौतामा रहेका राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई तलब प्रदान गर्ने गरेको छ।
केहि समय अघि क्यानले आफ्नो बर्गिकरणकै मातहतमा रहेर तलब प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त कदमको अहिले बिरोध भएको छ।
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित सोमपाल कामि, दीपेन्द्र र कमलले खेलाडी ग्रेडिंग हुने बित्तिकै असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै क्यानको बर्गिकरणको प्रक्रियाका बारेमा आलोचना गरेका थिए।
सोमपाल कामिले ग्रेडिंगमा आफूलाई बी मा राखेपछि अन्यायपूर्ण रहेको बताए। ग्रेड सी मा परेका कमल पनि सन्तुष्ट थिएनन्।
कप्तान ज्ञानेन्द्र र दीपेन्द्र ऐरी ग्रेड ए मा थिए। तर क्रिकेट संघको ग्रेडिंग चित्त बुझ्दो नभएको र बर्गिकरण ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै मिडियामा आएपछि क्रिकेट संघ खेलाडीहरु संग रुष्ट बनेको थियो।
क्यानले आफ्नो विरोध गरेको भन्दै चार खेलाडीसँग कात्तिक २५ मा स्पष्टीकरण नै सोध्यो।
खेलाडीले कात्तिक ३० मा क्यानलाई जवाफ दिए । तर क्यान सन्तुष्ट भएन ।
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित १९ खेलाडीले हस्ताक्षर गर्दै मंसिर ५ मा ११ बुँदे मागसहित सात दिनको समय दिँदै क्यानसँगै नै वर्गिकरण बारे स्पष्टीकरण सोधे । त्यसपछि विवाद झन बढ्दै गयो । क्यानले मंसिर ८ मा तीन दिनको समय दिँदै दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणमा पुरानै कुरा दोहोरिएको र चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको क्यान स्रोतले जनाएको छ । क्यानले खेलाडीले बोर्डविरुद्ध बोलेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) सँग समन्वय गरेर कारबाही गर्ने मनासयमा छ।
त्यसैलाई कारण देखाउँदै सुरु भएको स्पष्टीकरणको माग अहिले तीन महिनासम्म प्रतिबन्ध लगाउने चर्चासम्म पुगेको छ।
‘कप्तानसहित चार जना मिडियामा गए । मिडियामा गएर धेरै बोल्नै नहुने कुरा बोलेका छन् । हामीले त्यसको स्पष्टिकरण सोधेका हौं । जवाफमा उल्टै हामीले नै गम्भीर गल्ति र अवहेलना गरेको मनासयको जवाफ दिए,’ क्रिकेट संघका एक सदस्यले बताएका छन्।
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले भने आफुहरुको माग जायज रहेको बताउदै आएका छन्।
Posted in क्रिकेट, राष्ट्रिय क्रिकेटTagged #cricket association nepal #hamro nepal sports #nepali cricket team
मेस्सीको बेलुन डी' ओर मनाउन पेरिसको विशेष 'गोल्डेन' जर्सी
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| पेरिस सेन्ट-जर्मेनले मोनाको विरुद्ध लियोनेल मेस्सीको कीर्तिमानी सातौं बालोन डी’ओर जितेको उत्सव मनाउन विशेष सुनको रंगको किट लगाएको थियो। स्ट्राइकरको उपलब्धि मनाउनको लागि पेरिसले सीमित संस्करणको किट डिजाइन गर्‍यो जसमा सुनको संख्या र नामहरू सहित उनीहरूको परम्परागत निलो होम स्ट्रिप समावेश रहेको थियो। १९९३ पछि पहिलो […]
राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमलाई ऐतिहासिक शृंखला
दोस्रो टि-२० मा, दक्षिण अफ्रिकाद्वारा वेस्ट इण्डिज १६ रनले पराजित !!
श्रीलंकालाइ ८९ रनले हराएको इङ्ग्ल्याण्डले टि२० शृंखला क्लिन स्विप गरेको छ !!!